Saturday, 04 July 2015 16:25 Zimbabwe''s mining industry is emerging as a main ... interested in the gold, platinum, chrome, nickel, diamond and coal mining units. ... Under the existing laws, mining companies pay unit taxes to district councils, ... GOLD MINING EQUIPMENT ON HIRE PURCHASE IS NOW AVAILABLE TO...
By: Oscar Nkala 24th June 2016 Chinese-made mining equipment worth $5-million ... Zimbabwe sets Tuesday deadline for chrome miner to cede half its claims ... for imports of spare parts and supplies, the Chamber of Mines said on Monday.
The Blanket Mine is located in the south-west of Zimbabwe approximately 15 km ... and equipment supplies are transported to the mine by road from Johannesburg, ... nickel and copper but also including coal, diamonds, PGE''s and chromite.
A profile of Chromite Mining in Zimbabwe with directories of companies, people, industry sectors, projects, facilities, news and events.
Sep 20, 2015 ... CHROME ore mining companies are yet to benefit from the lifting of a ban on ... Zimbabwe has three smelters that are in operation — Zimasco, ... small-scale miners, transporters and suppliers of equipment and services.
Mutorashanga is a small ferrochrome mining town in Mashonaland West province in Zimbabwe ... The "town" consists of the mines, a police station, a post office, a Zimbabwe Electricity Suppl...